Itekhnoloji esaHlumayo | Martech Zone
Ukuthengisa okuvelayo kunye netekhnoloji yokuthengisa kuxoxwe ngayo Martech Zone, kubandakanya ubukrelekrele bokuzenzela, i-bots, ukusetyenziswa kolwimi kwendalo, ukufunda ngomatshini, inyani ebonakalayo, njl.
NgoLwesine, Septemba 9, 2021 NgoLwesine, Septemba 9, 2021 URebecca Clyde
Iincoko ze-AI zinokuvula umnyango kumava edigital angcono kunye nokwanda kokuguqulwa kwabathengi. Kodwa banakho nokukwenza amava akho kumthengi. Nantsi indlela yokuyifumana ngokuchanekileyo. Abathengi banamhlanje balindele ukuba amashishini azise amava abo kunye nokufunwayo iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki, iintsuku ezingama-365 zonyaka. Iinkampani kuwo onke amashishini kufuneka zandise indlela yazo ukuze zinike abathengi ulawulo abalufunayo kunye nokuguqula ukungena
Iindlela ezi-8 kwiTekhnoloji yeTeknoloji yeRetail
NgoLwesihlanu, Julayi 30, 2021 NgoLwesihlanu, Julayi 30, 2021 UJui Bhatia
Umzi mveliso weentengiso ngumzi mveliso omkhulu oqhuba imisebenzi emininzi kunye nemisebenzi. Kule posi, siza kuthetha ngeyona nto iphambili kwisoftware yokuthengisa. Ngaphandle kokulinda kakhulu, masihambele phambili kutyekelo. Izinketho zokuhlawula -Izipaji zedijithali kunye neendlela ezahlukeneyo zokuhlawula zongeza ubhetyebhetye kwiintlawulo ezenziwa kwi-Intanethi. Abathengisi bafumana indlela elula kodwa ekhuselekileyo yokuhlangabezana neemfuno zabathengi. Kwiindlela zesiko, kuphela imali yayivunyelwe njengentlawulo